26% yevashandisi veApple Watch vanoshandisa iko kazhinji kuita mafoni | Ndinobva mac
26% yevashandisi veApple Watch vanoshandisa iyo nguva nenguva kuita mafoni
Rinopfuura vhiki rapfuura takatsigira runyerekupe rwazvino rwakatenderedza chizvarwa chechitatu Apple Watch, Apple Watch iyo inosanganisa chip yeLTE, asi hazvitibvumidze kufona, kufamba kusinganyatsoita pfungwa. Zvinoenderana nedhata kubva kuongororo yazvino yakaitwa pakati pevashandisi veApple Watch, pamusoro pekuishandisa kuitisa zviziviso, kuenzanisa chiitiko chemuviri chatinoita nevamwe, 26% yevashandisi vanogara vachishandisa kufona, kunyangwe nehunhu hwakashata iyo Apple Watch inotipa isu nenzira iyoyo.
Kana iwe uri vashandisi veApple Watch, zvinonyanya kuitika kuti iwe wakashandisa iyi sarudzo kana foni ikarira uye uri mune imwe kamuri, kutora runhare kana kuiita kana tichiziva izvozvo iyo nguva yacho ichave ipfupi, nekuda kwezvandambotaura kare, kune mhando yacho. Kuitwa kweLTE chip mune iyo Series 3, kunongogumira mukushandisa kwekubatana kwedata, danho neApple iro risingazokwidziridze kutengesa zvimwechetezvo, kunze kwekunge Apple ichida kuitengesa kwatiri neimwe nzira uko chip ichi inogona kunge iine basa chairo.
Semazuva ese, Apple yakagara ichiedza kutitengesera zvigadzirwa zvayo kuburikidza nemharidzo dzayoZvirokwazvo, kana kusakwanisa kwekufona kuchisimbiswa, kuedza kwakawanda kunofanirwa kuitwa kuitira kuti vashandisi vanetseke kumutsiridza yavo Apple Watch yechizvarwa chechitatu. Kana iko kuvhurwa kukasimbiswa, unoronga kuvandudza yako Apple Watch yemuenzaniso iyi neLTE yekubatanidza? kana sezvazviri nyaya yangu, ini ndinomirira kuti ndione kana zvichisimbiswa pakuvhurwa uye kutora mukana wekudonha kwemutengo uyo wazvino Series 1 uye Series 2 ichave nayo, pamwe neNike modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » 26% yevashandisi veApple Watch vanoshandisa iyo nguva nenguva kuita mafoni
Ivo vanobva Cupertino vanotumira maemail kunyeverwa nezvekuguma kwe32-bit kunyorera paMac
3 premium maapplication ekupa kweMac